LG tsy miandry ny MWC hanolotra ny LG Watch Sport sy ny Watch Style, hatolotra azy ireo amin'ny Alarobia | Vaovao momba ny gadget
Toa tsy hiandry ny fampisehoana mandritra ny hetsika any Barcelona ireo sampam-pitsikilovana vaovao avy amin'ny LG ary haseho ny Alarobia 8 febroary ho avy izao. Eny, miresaka momba ireo famataranandro roa namoaka tamin'ity herinandro ity tamin'ny Internet izahay, ny LG Watch Sport sy Watch Style, izay hiaraka amin'ny rafitra fiasa Android Wear 2.0 vaovao. Tamin'ny voalohany, ny andro hanolorana ireo akanjo azo ampiasaina vaovao miaraka amin'ny rafitra fiasa Android Wear 2.0 dia nanana daty ho an'ny faha-9 amin'ity volana ity, saingy azo inoana fa ny LG dia mialoha araka ny fivoahan'ny Evan Blass ao amin'ny tambajotra sosialy Twitter .
Ity no bitsika izay evleaks dia mamoaka fanavaozana kely avy amin'ny zavatra navoakany teo aloha, izay nokasaina hovotsorana ny 9 Febroary:
Fanavaozana: ny fanombohana ny famantaranandro sy ny lampihazo dia nakarina iray andro, hatramin'ny 8 feb.
* manamarina dumbwatch *
Hey, tsy ho ela izany! https://t.co/dzG6YPc4kp
- Evan Blass (@evleaks) 4 Febroary of 2017
Ho fanampin'izany dia efa manana mazava kokoa na tsy dia mazava loatra ny famaritana ireo fitaovana LG ireo isika, miaraka amina famantaranandro roa mahaliana izay ny tena mampiavaka azy dia ny fifandraisana 3G LTE ho an'ny maodelin'ny Sport sy ny 512 MB RAM ary ny habaka anatiny 4GB ho an'ilay maodely. Fomba fijery. Anisan'ireo fiasa hafa efa hitantsika teo aloha ary azo antoka fa manome tsindry tsara ireo fitaovana azo ampiasaina, manazava izany manohy miloka amin'ireo famantaranandro ireo ny orinasa. Hiandry ny alarobia izao isika hahita ny fanombohana ofisialy azy ireo ary avy eo dia "hikasika azy ireo" amin'ny rafitry ny MWC any Barcelona amin'ny faran'ity volana ity isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » LG tsy miandry ny MWC hanolotra ny LG Watch Sport sy Watch Style, hatolotra azy ireo amin'ny Alarobia